အချောဆုံးစာရင်းရဲ့ရလဒ်မှာ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားနာမည်ကျော်များ | News Bar Myanmar
အချောဆုံးစာရင်းရဲ့ရလဒ်မှာ ထိပ်ဆုံးနေရာတွေကို သိမ်းပိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားနာမည်ကျော်များ
ပရိသတ်ကြားမှာ လူသိများတဲ့ King Choice Website ကတော့ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ခါနီး December 21 ရက်နေ့မှာပဲ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ voting တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်မဲပေးလို့ရပြီး ၁ နာရီခြား တစ်ခါ မဲပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခါပေးတဲ့ မဲ3ခုတိတိ ပေးလို့ရတာဖြစ်လို့ အားပေးသူတွေဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်ပြီး ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နိုင်ဖို့ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။
Categories နှစ်ခုလုံးက စာရင်းဝင် အ​ယောက် ၁၀၀ ဟာ နိုင်ငံပေါင်းများစွာက နာမည်ကျော်တွေဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ January 10 ရက်နေ့မှာပဲ ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကမ္ဘာ့အခန့်ညားဆုံးအမျိုးသား အယောက် ၁၀၀ စာရင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့အလှပဆုံးအမျိုးသမီး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းထဲမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသားနာမည်ကြီးတွေဟာ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာပဲ ရယူထားပါတယ်။
“The 100 Most Handsome Men in the World 2020”
ထိုင်းမင်းသားချော Win Metawin ကတော့ စာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၈ နေရာကို ရယူသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတင်မကဘဲ နိုင်ငံတော်တော်များများက ပရိသတ်တွေကတော့ Win ကို အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
9. Bright Vachirawit
နံပါတ် ၉ နေရာကို သိမ်းပိုက်ထားသူကတော့ Bright Vachirawit ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bright ကတော့ Win နဲ့အတူ “2gether the series” မှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံအနှံ့မှာ ပရိသတ်အမြောက်အမြားရရှိခဲ့တာပါ။
“The 100 Most Beautiful Women in the World 2020”
အလှပဂေးလေး အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာတော့ နံပါတ် ၁​ နေရာကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသူလေး Lisa ပဲဖြစ်ပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုရှင်လေး Lisa မှာလည်း နိုင်ငံအနှံ့မှာ ပရိသတ်အများအပြားရှိပြီး ပံ့ပိုးထောက်ခံမှုတွေ ရရှိထားပါတယ်။
14. Yaya Urassaya
ချစ်စရာအသွင်အပြင်လေးနဲ့ လှပတင့်တယ်သူလေး Yaya ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ နံပါတ် ၁၄ နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဂုဏ်ပုဒ်သစ်တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
15. Baifern Pimchanok
အဆင်းရောအချင်းပါ ပြည့်စုံသူလေးအဖြစ် နာမည်ကြီးသူလေးကတော့ Baifern လေးပါပဲ။ Baifern ကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၅ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင် မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်း နာမည်ကြီးနေကြတဲ့အပြင် ချောမောလှပတဲ့သူတွေအများအပြားရှိတဲ့အနက် ၂၀၂၀ အတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့်ဝင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Next King Choice စစ်တမ်းအရ 2020 ခုနှစ်အတွက် ရုပ်ရည်အချောမောဆုံး အနုပညာရှင်များ »
Previous « အကအညံ့ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ကဘယ်သူလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် BTS ရဲ့တုန့်ပြန်ချက်